मञ्चला झा - कान्तिपुर समाचार
जुनसुकै मुलुकमा जेसुकै कारणले भएका द्वन्द्वमा महिला र बालबालिका सबभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धकालमा महिलालाई यौनतुष्टि पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएदेखि उक्त प्रवृत्ति निरन्तर चली नै रहेको छ । अहिले पनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारलाई द्वन्द्वको रणनीतिक हतियारका रूपमा अपनाइने प्रचलन प्रायः सबै मुलुकमा देखिन्छ ।
आज मैले न उनलाई रोक्न सकें न त आफूलाई नै  । विचित्रको अवस्था भयो हाम्रो  ।
२०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।
‘हामीले न्याय कहिले पाउने ? तपार्इंहरूबाट पनि अब कुनै आस छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन,’ द्वन्द्वकालमा बलात्कृत एक महिलाले पीडा पोखिन् । ‘तपाईंहरू आयोगमा खालि जागिर खान आउनुभएको हो ? हामीले न्याय कहिले पाउने ? कि त छाड्नोस् कि त न्याय दिलाउनुस्,’ आक्रोशित स्वरमा एक जमात पीडितले कार्यकक्षमा प्रवेश गरेरै भने ।
मञ्चला झाका लेखहरु :